ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှု လွန်ကဲပြီး ကြိုးနီစနစ်ကြောင့် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများ ပျော်ရွှင်စွာ တာဝန်ထမ်? - Yangon Media Group
ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှု လွန်ကဲပြီး ကြိုးနီစနစ်ကြောင့် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများ ပျော်ရွှင်စွာ တာဝန်ထမ်?
နေပြည်တော်၊ နိုဝင်ဘာ ၁၇
နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများဒေသပြောင်းရွှေ့ခွင့်စနစ်မှာ ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလွန်ကဲပြီး ကြိုးနီစနစ်ကြောင့် ပျော်ရွှင်စွာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ရခြင်းမရှိဟု အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးကိုကိုနိုင်က ပြောသည်။ နိုဝင်ဘာ ၁၇ ရက် ဒုတိယအကြိမ် အမျိုးသားလွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွင် ကိုယ်စားလှယ် ဦးကိုကိုနိုင်က နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း၊ အရာထမ်း၊ အမှုထမ်းများ၏ ဒေသပြောင်း ရွှေ့ခွင့်ကို ၎င်းတို့ဆန္ဒရှိပါက မိသားစုအဆင် ပြေအခြေချရာ ဒေသများသို့ ပြောင်းရွှေ့ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခွင့်ပြုပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ၊ မရှိမေးမြန်းခဲ့ပြီး ယင်းသို့ပြောကြားခဲ့သည်။
၁၉၉ဝ ပြည့်နှစ်မတိုင်ခင်ကာလများက နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများဒေသပြောင်းရွှေ့ရာတွင် မြို့နယ်အဆင့်ဌာနတာဝန်ခံနှင့်ဦးစီး အရာရှိများမှအပ အခြားဝန်ထမ်းများကို တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်တာဝန်ခံများ အားလုပ်ပိုင်ခွင့်ချထားပေးပြီး တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှုဖြင့် ဆောင်ရွက်စေခဲ့သည်ဟု ဦးကိုကိုနိုင်ကဆိုသည်။ ”အဆိုပါကာလနောက်ပိုင်း လုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရသော ဦးစီးဌာနအဖွဲ့အစည်းအကြီးအကဲများ Decision Maker များသာမက ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး Policy Maker များကပါ ဝန်ထမ်း ရေးရာကိစ္စရပ်များကို ထိန်းချုပ်ဆောင်ရွက် လာမှုအပေါ်မှာ ဝန်ထမ်းချုပ်ကိုင်မှု၊ ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလွန်ကဲလာပြီး ရှုပ်ထွေးသောကြိုး နီစနစ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သဖြင့် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း၊ အရာရှိငယ်များမှာ ဆီလျော်မှုမရှိတဲ့ဒေသ များမှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ရတဲ့အတွက် မိသားစုအခက်အခဲ၊ ကျန်းမာရေးအခက် အခဲ၊ လူမှုရေးအခက်အခဲများစွာကိုရင်ဆိုင်ရပြီး ပျော်ရွှင်စွာတာဝန်ထမ်းဆောင်ရခြင်း မရှိတာကို သိရပါတယ်”ဟု ဦးကိုကိုနိုင်က ပြောသည်။
နိုင်ငံဝန်ထမ်းများအနေဖြင့် ပျော်ရွှင်မှုရှိရန်၊ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုလျော့နည်းရန်၊ ဒေသခံပြည်သူများနှင့် လိုက်လျောညီ ထွေမှုရှိရန် မိသားစုအခြေချရာနေရာတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခွင့်ပေးရန်လိုအပ် ကြောင်း ၎င်းကဆိုသည်။ ယင်းအပေါ် ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန် အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာဝင်းသိန်းက နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများအနေဖြင့် ဒေသပြောင်းရွှေ့ခွင့် တင်ပြလာပါက လူမှုရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ မိသားစုပေါင်းစည်းနေထိုင်ရေးကိုစိစစ်ပြီး ပြောင်းရွှေ့နေရာချပေးလျက်ရှိဟုဆိုသည်။ ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာဝင်းသိန်းက ”ဝန်ထမ်းများ၏ဆန္ဒအရ ဒေသပြောင်းရွှေ့တာဝန်ထမ်း ဆောင်ခွင့်ပြုနိုင်ပါရန် တင်ပြလာပါက လူမှု ရေးအခက်အခဲတင်ပြချက်၊ ကျန်းမာရေးအ ခြေအနေတင်ပြချက်၊ မိသားစုပေါင်းစည်း နေထိုင်ရေးတင်ပြချက်၊ ပြောင်းရွှေ့လိုသော အကြောင်းအရင်းကိုစိစစ်ပြီး ပြောင်းရွှေ့ လိုသောဒေသရှိ အိမ်ထောင်စုဇယားကိုပါ ပူးတွဲတင်ပြစေပြီး သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာန စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီ၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် ပြောင်းရွှေ့နေရာချထားပေးလျက်ရှိပါတယ်”ဟု ဆိုသည်။
OIC တင်သွင်းပြီး ကုလလူ့အခွင့်အရေး ကော်မတီက အတည်ပြုပေးလိုက်သည့် မြန်မာ့အရေး ဆုံးဖြတ်ချက်မူကြ
အောင်လံမြို့မ ရဲတပ်ဖွဲ့စခန်းမှ အချုပ်သားများကို မြို့နယ် ကျန်းမာရေး ဦးစီးဌာနမှ ဆရာဝန်ကြီ
မန္တလေးမြို့တွင် (၉)ကြိမ်မြောက် နိုင်ငံတကာတက္ကသိုလ်ကျောင်းပေါင်းစုံ အခမဲ့ ပညာရေးဆွေးနွေးပွဲ
သမ္မတအိမ်တော်တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည့် လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအထူးအစည်းအဝေး၌ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီး
မြန်မာနိုင်ငံ တောင်ပိုင်းဒေသ ပြည်သူများအတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေမည့် USAID စီမံကိန်းအသစ် အတွက် ဒေ